Indlela yokunakekela kahle izithende zakho? Indlela ephumelela kakhulu yokusebenzisa ekhaya.
Izindlela eziphumelelayo zokususa isikhumba esinamazinyo
Amathiphu ambalwa okusiza kahle ukunakekela izinyawo zakho.
Isikhumba esinamahloni asibukeka sihle kakhulu, kungakhathaliseki ukuthi sizini. Ngisho noma kungekho muntu ohamba egcekeni ngesikhathi sasebusika nasezicathulweni ezivulekile, ukuqina kwesikhumba nokuqhekeka ezinyaweni kuletha izinkinga eziningi. Ngakho-ke, ukunakekela ubuso, intamo nezandla akufanele zikhohlwe ngemilenze. Kodwa kuthiwani uma inkinga isivele yenzeka? Ukuze ususe isikhumba esiboshiwe ezinyaweni, kwanele ukusebenzisa indlela elula, esizoxoxa ngayo kulesi sihloko.
Ukulungiselela. Isinyathelo sokuqala ukuthi ungalungisa kanjani ukuyeka ukuhlanza. Thelela amanzi afudumele emgodini bese unciphisa imilenze kuwo cishe imizuzu eyishumi. Ngaphezu kwalokho, ungakwazi ukususa ukukhathala uma ufaka amaconsi ambalwa amafutha abalulekile noma usawoti usawoti.
Ukususa isikhumba esibi. Ngemuva kokuthi imilenze ihlulwe futhi izinyawo ziyancipha, ungaqala ukususa izindawo ezihlosiwe. Ukuze wenze lokhu, kuzodingeka uthenge amathuluzi akhethekile kusengaphambili: itshe le-pumice, ibhulashi noma i-saw. Lezi zinsuku zisetshenziselwa amacala azinakekelwa ikakhulukazi, lapho isikhumba singasusiwe ngezinye izindlela.
Le nqubo kufanele iqhutshwe ngokucophelela futhi kungenjalo uma ungasebenzisi amandla, ngaphandle kwalokho uzolimaza isikhumba esiphephile. Imilenze yokuthoma kufanele isuliwe ngokucophelela ngethawula.
Kubalulekile! Ungalokothi usebenzise i-razor noma i-blade ukuqedela inqubo ngokushesha. Uma isikhumba esinamahloni sonyawo siningi kakhulu, ukususwa kwalo kungabambezeleka. Kulesi simo, kungcono ukuthenga ifayela legesi, elizosheshisa kakhulu ukusika isikhumba.
Uma konke okweqile kususiwe ezithende, gwema imilenze futhi emanzini afudumele. Qinisekisa ukuthi uthele okusha bese ufaka amaconsi ambalwa wamafutha akho abathandayo abalulekile.
Ngemuva kokugeza, sula izinyawo futhi uphathe ngezinyawo ezikhethekile, bese uphonsa ukhilimu onomsoco emilenzeni. Beka amasokisi akho ezinyaweni zakho, mhlawumbe kusuka ekotini.
Zonke lezi zinqubo zinconywa ukuba zenziwe okungenani kanye ngesonto ukuze kamuva zikhohlwe ngokuchohloka ezinyaweni. Kodwa kunezinye izindlela zokususa isikhumba esinzima sezinyawo, okhokho bethu abasebenzisa.
Ngemva kokugeza izinyawo zakho ngokugcwele, faka isithende ngasinye isigamu se-bulb esisha, ubeke amasokisi okwenziwa kwendwangu yemvelo bese uyishiya ihora nesigamu. Ngemuva kwalesi sikhathi, isikhumba sizobe sesithambile futhi sitholakale kalula ku-pumice. Le ndlela izosebenza ngisho nasezikhungweni ezimbi kakhulu, uma iqhutshwa njalo ngezinsuku ezintathu.
Ukuze ususe isikhumba esinamahloni ezinyaweni, isobho evamile nesoda kuyosiza. Insipho kumele igujiswe (ungayibhalela ku-grater), engeza isipuni soda kuso futhi uyisebenzise ukuze uhlanze izinyawo. Khona-ke izinyawo kufanele ziboshwe ngefilimu noma zihlanganiswe ngokuqinile ngezikhwama zepulasitiki ezijwayelekile.
Gcina ingxube cishe imizuzu engamashumi amabili, bese ususa isikhumba esifile ngesibhashini noma ubheke umhlanga bese ugeza unyawo emanzini afudumele.
Khona-ke kufanele ususe umnqumo noma amanye amafutha omquba emazithende, ulinde aze athole, futhi afake amasokisi afudumele.
Kunconywa ukufeza le nqubo kanye ngesonto, kodwa lapho isikhumba siqala ukukhukhula kaningi, kuyoba nokunakekelwa okwanele nenyanga.
Empeleni, ukubukeka kwalenkinga kungagwenywa. Vele ukhethe izicathulo eziphezulu futhi ugcine uhlanzekile ngaso sonke isikhathi. Futhi ehlobo gwema izicathulo ngesithende esivulekile, njengokungcola namatshe futhi kuholele ekuqotheni isikhumba sezinyawo.
Indlela engcono kakhulu yokwehlisa izinwele emilenzeni
Ingabe kuyingozi ukugqoka izithende eziphakeme?
Inkimbinkimbi yokunakekela izinyawo nezandla
Indlela yokwenza ngokushesha imilenze emihle
Ukunakekelwa kwezinyawo emakhazeni
Ukunakekelwa kwezinyawo ngamakholi
Ukunakekela isikhumba ngesikhathi sokukhulelwa
Ingabe Ekaterina Tikhonova ngempela indodakazi kaPutin? Izinzuzo kanye ne-Cons
Ukugcoba umzimba, ukunakekelwa kwezipikili ezinzima
Izimbali ezivela ephepheni ngezandla zazo
Ikhekhe elimnandi ngamakhiwane nama-alimondi
Yini esiza i-yoga
Izinwele ezinhle nezinempilo
Izindlela zokwelapha ze-herpes zoster
Izimpawu ezihlobene namakati
Izimpawu kanye nokwelashwa kokucindezeleka
Indlela yokukhamba ngamanzi ukhukhamba - endaweni yokushisa nokuvuleka komhlaba, izithombe, ividiyo
Amafutha om-alimondi kusuka emanzini elula